Dhulgariir labaad ayaa ku dhuftay Lombok - Worldnews.com
Dhulgariir labaad ayaa ku dhuftay Lombok
Jasiiradda dalka Indunisiya ee Lombok ayaa waxaa ku dhuftay dhulgariir kale, xilli kii hore aanan laga soo kaban, walina la baadi goobayo dad ku maqnaa kii horey u dhacay.
Wakaaladda samayska dhulka ee Maraykanka ee USGS ayaa sheegtay in dhulgariirka uu cabirkiisa gaarayay 5.9 cabirka dhulgariirada, waxaana
Dhul gariir hor leh oo ku dhuftay jasiirad ku taalla Indunisiya
Jasiiradda ku taalla dalka Indunisiya ee Lombok waxaa ku dhuftay dhul gariir kale oo xooggan kaddib markii labo toddobaad ka hor dhul gariir halkaasi ka dhacay ay ku...
Dhulgariir ku dhuftay gobolka Aceh ee dalka Indonesia ayaa dilay ugu yaraan 97 ruux, sida ay sheegeen saraakiisha millatarigu. Cabirka dhulgariirka ayaa lagu qiyaasay 6.5,...
Dhulgariir ku dhufatay Iran iyo Ciraaq oo ay ku dhinteen 4 boqol qof
Dhulgariir cabbirkiisa lagu qiyaasay 7.3 halbeegga dhulgariirka ayaa ku dhuftay dhulka u dhaxeeya Iraan iyo Ciraaq. Illaa afar boqol oo qof ayaa illaa hadda ku dhimatay...
Indonesia: dhulgariis 97 dilay 14 masaajidna burburiyay
Dhul gariir xooggan ayaa ku dhuftay deegaan dalxiiska caan ku ah oo ku yaalla dalka Indonesia, waxaana ku dhintay ugu yaraan 10 qof. Dhul gariirkan oo lagu khiyaasay 6.4...
BBC News 2018-07-29
Dadkii dhulgariirku ku helay Iiraan oo habeenkii labaad hoy la'aan ah
Kumannaan ruux oo reer Iiraan ah ayaa habeenkii labaad hoy la'aan baryay iyadoo ay cimiladu aad u qabawdahay, ka dib markii uu dhulgariir xoog badan ku dhuftay galbeedka...
Dadkii dhulgariirku ku helay Iiraan oo habeenkii labaad hoy la\_'aan ah
Kumannaan ruux oo reer Iiraan ah ayaa habeenkii labaad hoy la'aan baryay iyadoo ay cimiladu aad u qabawdahay, ka dib markii uu dhulgariir xoog badan ku dhuftay galbeedka dalkaas. Dawladda ayaa la daalaadhacaysa in ay gargaar gaarsiiso goobaha ugu daran ee Kermanshah, halkaas oo kumannaan guri ay ku burbureen. In kabadan 400 oo ruux ayaa ku dhintay 7,000 oo kalana dhaawacyo ayaa...
SAWIRRO: 384 qof oo ku dhintay Dhulgariir iyo Duufaan ku dhuftay Indonesia
Ugu yaraan 384 qof ayaa la xaqiijiyay inay ku geeriyoodeen Duufaan ka dhalatay dhulgariir cabbirkiisu gaaraya 7.5 ayaa ku dhuftay magaala xeebeedka Pelu ee dalka Induniisiya. Hirka badda oo ka dhashay dhulgariirka iyo duufaanta culus wada socday ayaa wuxuu ku socday joog dhan 2 miitir wuxuu ku dhuftay magaalada Palu oo ku taallo Jasiiradda Sulawesi. Muuqaal laga soo duubay...
Pelu: Duufaanta ku dhufatay jasiiradda Lombok waxaa ku dhintay 5 qof
Duufaan ka dhalatay dhulgariir cabbirkiisu gaaraya 7.5 ayaa ku dhuftay magaala xeebeedka Pelu ee dalka Induniisiya. Hirka badda oo ka dhashay dhulgariirka iyo duufaanta culus wada socday ayaa wuxuu ku socday joog dhan 2 miitir wuxuu ku dhuftay magaalada Palu oo ku taallo Jasiiradda Sulawesi. Muuqaal laga soo duubay masiibadaasi oo baraha bulshada lagu baahiyey ayaa waxaa ka...
Dhulgariirka Talyaanaiga: kumanaan qof ayaa seexday dhismayaal ku meel gaar ah
Kumanaan qof ayaa bartamaha Talyaaniga seexday baabuurtooda teendhooyin iyo xarumo ku meel gaar ah oo hoy looga sameeyay, ka dib afar dhulgariir oo halkaa ku dhuftay saddex bilood gudaheed. Dhulgariirka oo quwadiisa ay tahay 6.6- ayaa ahaa kii ugu xooganaa tobanaan sano, wuxuuna ka dhacay meel u dhow gobol ay ku dhinteen ku dhawaad 300 oo qof dhulgariir ka dhacay bishii August....
Samatabixinta dhulgariirka Japan oo sare loo qaaday
Shaqaalaha gurmadka Japan ayaa waxa ay sare u qaadeen dadaalada ay ku baadi goobayaan dad ka badbaaday laba dhulgariir oo waa weyn oo ka dhacay koonfurta dalkaasi. Dhulgariirka ayaa dhacay habeenimadii Khamiista iyo kii Jimcaha, waxaana uu halkaa ku dilay 41 qof. Tobaneeyo qof ayaa la la’yahay waxaana...